Zụrụ Bitcoin na Afghanistan n'otu ntabi anya na Nchekwa | Paxful
Zụta Bitcoin ozugbo na Afghanistan
Gbanwee Afghan Afghani (AFN) n'ime BTC taa site na iji Paxful, ndị ahịa Bitcoin na eduzi mmadu n'ụwa. N'adịghị ka mgbanwe mmekọrịta ọdịnala nke Bitcoin, anyị emeela ka ị nwee ike ịzụta BTC n'okpuru ọnụahịa ahịa ugbu a na enweghị ụgwọ mgbakwunye.
Ichebe ego gị bụ ihe kachasị mkpa anyị na ọ bụ ya mere ejiri usoro nzuzo nchekwa dị ka nyocha 2-factor kwadoro akaụntụ gị. Site na mmekorita anyị na Chainalysis na Group-IB, ị nwere ike ime ka uche gị dị jụụ na ịmara na Paxful bụ otu n'ime nyiwe kachasị nchebe ịzụta Bitcoin.
Ya mere, egbula oge ma mepụta akaụntụ na Paxful. Họrọ site na ebumnobi orire na ozuzu ahịa apụghị ịgụta ọnụ Bitcoin ma bido ịzụ ahịa gị na enweghị nhịahụ ugbu a site na desktọpụ gị, laptọọpụ, iOS, ma ọ bụ ngwaọrụ Android!
Anyị enweghị ebumnobi orire na ozuzu ahịa maka Afghan Afghani na Afghanistan na n'oge ahụ. N'okpuru ebe a bụ ebumnobi orire na ozuzu ahịa nwere ike ịmasị gị.
Usoro ọkwụkwụụgwọ dị elu na Afghanistan
Nyefee Waya Mbaụwa (SWIFT)
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Nyefee Waya Mbaụwa (SWIFT) taata.
Zụta Bitcoin na Nyefee Waya Mbaụwa (SWIFT)
Nyere ndị ọzọ aka na Afghanistan inweta Bitcoin maa ịnwere ike irite NNUKWU uru ruo 60% na azụchaa ahịa ọ bụla. Bido iji akaụntụ ụlọakụ mpaghara ere ihe ugbu a, lee ntuziaka anyị n’efu. Paxful na enweta ndị na azụta Bitcoin karị 1000 site na Afghanistan kwa ụbọchị.
Imaara ọtụtụ ndị chọrọ ịzụ Bitcoin na Afghanistan? Site na Obere ụlọahịa Bitcoin na Gbakwụnye Programụ ị na enweta 2% na azụmaahịa ọ bụla ruo mgbe ebighi ebi site na ịkekọrịta njikọ. Bido ugbu a.